Fanambaràna 12 - Ny Baiboly
Fanambaràna toko 12
Ny famantarana lehibe fito - Ny voalohany: Ilay Vehivavy sy ny Dragona - Azera amin'ny tany ny Dragona, dia manenjika an-dRavehivavy.
1Nony inona, nisy famantarana lehibe niseho teny an-danitra, dia Vehivavy anankiray nitafy masoandro, ny volana no teo an-tongony, kintana roa ambin'ny folo no satro-boninahitra teny an-dohany. 2Bevohoka izy, sady nihetsi-jaza, ka nitaraina noho ny fanaintainam-piterahana.
3Ary nisy famantarana hafa koa niseho teny an-danitra, dia Dragona mena lehibe anankiray nitranga tampoka, fito ny lohany, folo ny tandrony, ary satro-boninahitra fito no teny an-dohany. 4Nofinaokany tamin'ny rambony ny ampahatelon'ny kitan'ny lanitra ka nazerany tamin'ny tany. Dia nijoro teo anoloan-dRavehivavy hiteraka izy mba handrapaka ny Zanany, raha vao teraka. 5Tera-dahy Ravehivavy, ary io Zanany io no hifehy ny firenena rehetra amin'ny tsora-by, ka nakarina ho any amin'Andriamanitra eo anilan'ny seza fiandrianany. 6Fa Ravehivavy kosa nandositra nankany an'efitra, fa any no nanamboaran'Andriamanitra toerana ho azy, mba hamelomana azy mandritra ny enim-polo amby roan-jato sy arivo andro.
13Nony hitan'ilay Dragona fa voazera amin'ny tany izy, dia ilay Vehivavy tera-dahy no nenjehiny. 14Nomena ela-boromahery lehibe roa anefa Ravehivavy, mba hanidinany ho any an'efitra amin'ny fitoerany, izay namelomana azy fotoana iray, sy fotoana roa, ary antsasaky ny fotoana, mba tsy hahitan'ilay menarana azy. 15Dia nandefa rano toy ny ony avy amin'ny vavany ilay menarana, hankany amin-dRavehivavy, mba hipaohan'ny ony azy. 16Kanjo novonjen'ny tany kosa Ravehivavy, fa nivava ny tany, dia nitelina ny ony nalefan'ilay Dragona tamin'ny vavany. 17Tezitra tamin-dRavehivavy ny Dragona, ka ary amin'ny zanany sisa mitandrina ny didin'Andriamanitra sy maharitra amin'ny fanambaran'i Jesoa no nifotrohany niadiana; 18dia teny amin'ny fasi-dranomasina izy no nitsatoka. >